Ukuziphatha - ngokubeka umkhawulo ekuzibandakanyeni nezinye izinsiza, sinciphisa izinketho nezenzo amathemba ethu azenzayo, siqinisekisa ukuthi maningi amathuba okuthi aguqulwe kunokuba abhekabheke.
Isakhi esenziwe ngezifiso ngokuphelele se-Instapage senza amabhizinisi akwazi ukudala amakhasi amahle afika lapho efika khona. Ngokuhlelwa kwezakhi zomongo, amafonti angaphezu kuka-5,000 33, nezithombe eziyizigidi ezingama-XNUMX ezizosebenza nazo, umakhi wekhasi lokufika we-Instapage ukhipha izinhlungu ekukhiqizeni amakhasi okufika afika kuhlobo lomkhiqizo, aguquguqukayo. Izici zifaka:
Ukulethwa Kwempahla Yedijithali - Zisindise isinyathelo ngokusetha uhlelo oluzenzakalelayo lokulethwa kwempahla yedijithali. Ngokuchofoza okumbalwa ungaqinisekisa ukuthi lapho abahola phambili bakho bengenela ukunikezwa, kwenziwa kutholakale kubo ukuze bakulande ngokushesha.
I-Global Blocks - Phatha izifanekiso zomhlaba ngokuzikhandla ukuze uqinisekise ukuthi wonke amakhasi ahambisana nomkhiqizo. Yakha ama-Instablocks wangokwezifiso, ku-brand afana nonhlokweni, unyaweni, noma amabhulokhi womkhiqizo ongawasebenzisa kumakhulu noma izinkulungwane zamakhasi. Ngemuva kwalokho, hlela ibhulokhi kanye bese izinguquko zakho ziboniswa kuwo wonke amakhasi lapho kuvela khona ibhulokhi.
Amafonti ngokwezifiso (Google & Typekit) - Amafonti ngokwezifiso akuvumela ukuthi ubonise ubunikazi bomkhiqizo wakho. I-Instapage iyona kuphela ipulatifomu enikezela ukufinyelela kuma-Webfonts we-premium we-5,000 + cishe izinketho zefonti eziphindwe izikhathi eziyikhulu kunanoma iyiphi enye isoftware yekhasi lokufika emakethe.
Ukulandela ngomkhondo i-Pixel Tracking - Sebenzisa ukulandela ngomkhondo kwe-pixel yokulandela ngomkhondo ukulandela ukuguqulwa kwangaphandle noma ukuphinda ufune izivakashi ezingaguquki ekhasini lakho lokufika.